Kutheni Coinbase otyholwa sithwalisa inethiwekhi Bitcoin nendlela SegWit imisebenzi ? - Blockchain News
EyoMdumba 12, 2018 admin
Kutheni Coinbase otyholwa sithwalisa inethiwekhi Bitcoin nendlela SegWit imisebenzi ?
Nendlela ezifunekayo iinjineli ezininzi Coinbase ukwazisa SegWit.
ngoFebruwari 5, exchange Coinbase Cryptocurrency wabeka tweet, ukukwazisa ukuba “iqela uphuhliso kwinqanaba lokugqibela lovavanyo SegWit”, yaye “yokuthumela nokufumana bitcoins ngenkxaso SegWit ziya kufumaneka apha kwiiveki ezimbalwa”.
Coinbase isaziso umsebenzi SegWit ekuqaleni ngoDisemba kunyaka ophelileyo, ukuphendula omnye imibuzo ebuzwa rhoqo ezivela kubasebenzisi “indlela iinjineli Coinbase ezininzi ziyafuneka ukuba ukwazisa SegWit.”
Ngo December 16, Coinbase usekela-mongameli Dan romero kupapashwa isithuba kwi Coinbase blog esemthethweni, ukwazisa ukuba ukusungulwa SegWit icetyelwe ukuba 2018, kwaye okwangoku iqembu “ukusebenza nokuphunyezwa ezikhuselekileyo SegWit.” Romero ugxininisa ukuba “ku kuqala – ukhuseleko kunye nomsebenzi ngokucikizekileyo exchange”, yaye ukuthetha magama ezithile.
kunjalo, phezu nokulatyuza December “Bitcoin Mania”, abasebenzisi ukunganeliseki wakhula kunye ukuxakeka yenethiwekhi ngayo: zingxoxo, kuquka Coinbase and GDAX, abazange bakwazi ukumelana irekhodi imfuno waya intanethi, imirhumo kunye transaction ixesha isiqinisekiso banda. Phakathi ku-Januwari, abathengi wathumela CEO Coinbase Bryan Armstrong isikhalazo ukuba oluqokelelweyo ngaphezu 12,000 amaqoqo, ubiza senkxaso SegWit njengeprayorithi 2018. Jameson Race, injineli aziintloko BitGo isikhwama crypto, ebizwa ngokuba ndilahliwe iinkonzo Coinbase: “Olu kwafunyaniswa ukuba kubangela nomthwalo kuthungelwano Bitcoin ibangwa iinkonzo ezaziwayo ezifana Blockchain.info, Coinbase and Gemini, leyo okungafanelekanga sebenzisa isithuba block. Ukuba ngaba sifuna ukufaka isandla kule, musa ukusisebenzisa. ” Armstrong kwakhona basabela intlawulo, ethi “Coinbase uyasebenza kwemicimbi packetizing, SegWit kunye nezinye izicwangciso ukuphelisa ngxi kwi-network.”
SegWit ijolise ukusombulula le ngxaki scalability ngokunciphisa ubukhulu transactions. Le protocol yaphakanyiswa yi umbhekisi phambili Blockstream Peter Wellle, kwaye softphone eyenza ukuba ukusetyenziswa SegWit, kwenzeka kwinethiwekhi Bitcoin ngo Agasti kunyaka ophelileyo. Phakathi iinkonzo esele ukuxhasa iteknoloji – wallets Ledger, ekhuselekileyo, Nesiliva and Samourai Wallet, kwakunye Crypto-Exchange HitBTC, ShapeShift and Bitstamp. Ukuze siqonde indlela SegWit inceda inethiwekhi Bitcoin, kuyimfuneko ukuba ukucinga kwinqanaba elula bo bemihla bitcoin-transactions ukuba ahambe kwinethiwekhi Bitcoin ngokohlobo “ulwazi iipakethe”, bombhalo labo kunye nokuchaneka etshekishwa yi ezalathelwe uphuhliso. Ukuba zonke iindawo bayavuma ukuba Okwenziwayo ilungile, ngoko ukuvumelana kuphunyelelwa. Le ntengiselwano yakhiwe iinxalenye ezimbini: igalelo nemveliso – “input” yaye “Phuma”, kuzo inxalenye yokuqala inoxanduva “iyavula”, yiyo i, ukufumana bitcoins (kwaye iqulathe ulwazi malunga kumthumeli), kwesibili – for “uvala” ngekusasa ukuthunyelwa olunokubakho. Igalelo data kwakhona iqulethe utyikityo esiqinisekisa imbalelwano le nezitshixo zabucala nezikawonke-.
technology SegWit (wokuhlaliswa Witness) ezithiwe transaction ibe ngamaqela amabini kwaye lidlulise utyikityo (“ingqina”) kuyimfuneko ukuba “ukuvula” i bitcoins ifunyenwe, ekupheleni intengiselwano, ngaphandle block main. Kule meko, iyunithi engundoqo iqulethe iinkcukacha malunga yomamkeli kunye kumthumeli, kwaye i “ingqina” iqulathe izikripthi kunye neesiginitsha, yiyo i, ulwazi kuyimfuneko ukuqinisekisa lungamkeleki, kodwa ke soze kusetyenziswa. Thathela ingqalelo ukuba amakhasi ahlala ngayo 60% umqulu intengiselwano, ukuzikhetha kunciphisa ngokubaluleka ubungakanani block, ngaleyo ndlela kwande bandwidth womnatha kunye nokunciphisa iindleko iintlawulo zentengiselwano.
Ingaba Bitcoin a Project US Intelligence ?
Ingongoma umbono fr ...
Kumazwe ahlukeneyo, Amaxabiso bitcoin ingahluka
Kutheni ku cou ezahlukeneyo ...
Rakuten uqala cryptocurrency yayo
in 2016, i Japanes ...
Post Previous:Coincheck yazisa ukubuyiselwa ukuqala kwiveki ezayo
Post Next:Mario Draghi: ummiselo Bitcoin ayikho uxanduva ECB xa
these details uthi:
UCanzibe 3, 2018 e 7:15 AM